Angle chigaro Valve
Hwidibiro Water Solenoid mavharuvhu
Direct-kuita Solenoid mavharuvhu
2-2way Direct-kuita Solenoid mavharuvhu
2-3way Direct-kuita Solenoid mavharuvhu
Ningbo Quanjia Pneumatic zvinoriumba Manufacturing Co., Ltd. ari nyanzvi akaigadzira Urume kuzvidzora zvinoriumba akadai angled chigaro vharafu, ari remagetsi vharuvhu, pneumatic angled chigaro vharafu, mhepo kudzora vharuvhu, Ex-uchapupu solenoid Coils, Integrated design, budiriro uye gadzira .
boka redu ane dzakawanda anogadza yakaisvonaka muitiro midziyo pamwe dzakawanda yemhando sandara, uye vakagadzirira pamwe mukuru-zvakarurama nekuongororwa mudziyo uye michina. Tinotevedzera JB / T 7352-94, ISO9001: 2000 yepamusoro utariri hurongwa mureza, adopts mberi gadzira mitoo uye kunyatsoomerera muitiro kudzora nzira pave unhu. Panguva iyoyowo, tinogona kugadzira kubudisa Urume kuzvidzora zvinoriumba dzakadai remagetsi vharuvhu, pneumatic angled chigaro vharafu, mhepo kudzora vharuvhu, Ex-uchapupu solenoid Coils chaizvo Specs maererano nezvaidiwa vatengi.
"Endai zvose kuti kusika zvakanakisisa zvigadzirwa" ndiro kuchinja kutsvaka uye tenet nokuda Quanjia vanhu. boka redu kutevera nhungamiro iyi sezvo vasati kubudisa akanakisisa zvinhu uye vashumire pahupamhi vatengi.